I-lumbago iyintandokazi entwasahlobo, kuba igqoke iingubo ezinobumba kunye neyeza elinamandla. Yaye ingaba yintoni enhle ngaphezu kweentyatyambo entwasahlobo? I-Spring ayifakwanga ngamandla ngokupheleleyo, kodwa ubomi behlathi bubilayo. Apha apha ehlabathini intsholongwane iyahlulwa, ifana nesilwanyana esinqabileyo, esinyameke ngezantsi. Ukuba ufika kuye kwiintsuku ezimbalwa, ukufana kuya kwanda kuphela: kwinqanaba leboya liya kubonakala inwele yentloko, kwaye emva kwexesha i-fluff ehlekisayo iya kuba yintyatyambo egqibeleleyo-kunye ne-blue-lilac ipalals kunye nomgca ophuzi obomvu. Le yintsipho yokuphupha, okanye igumbi elivulekileyo. Kwaye kuthi nje uthanda kakhulu intwasahlobo. Isityalo esicetywayo kwiintsapho zebluecups, ezidweliswe kwiBlack Data Book. Kulo mzimba wakhe oququzelayo uqukethe iprotoanemonin, eyokwomileyo ibe yintsholongwane ye-bicyclic lactone, i-glycocide rannunculin, kunye ne-saponins, i-tanins kunye nama-acids, i-phytoncides kunye ne-resins. Utshisa kwaye uyithande kakhulu, inetyhefu. Kubantu abanobucaluli, nangona xa bethintekile, ukucaphukisa isikhumba kunokuthi kwenzeke, ukuya kuvela kubonakala.
"Ophule" ophilisa. Kuye kwaziwa ixesha elide: apho kukho inetyhefu eqinile - kukho iyeza elinamandla! Akuyona ingozi ukuba igama elithi "i-pharmacology" livela kwigama lesiGrike, ukuguqulelwa kweso siRashiya kuthetha ityhefu. Ngoko inzala kwimpahla yokuphulukisa ye-lumbago ye-intandokazi evulekileyo yentwasahlobo ayikumangalisi. Ekuhambeni kweengxelo zokulinga, kwafunyanwa ukuba i-decoctions kunye ne-alcohol tinctures ukusuka kwi-lumbago evulekileyo yengcinezelo yegazi, iyancipha umpompo kwaye ikhuthaza ukuphefumula, ngoko ke iphumelele kwi-hypertension ne-tachycardia. Iprotoanemonin inefuthe elichanekileyo le-bactericidal kunye nefuthe le-fungicidal: libhubhisa ama-spores of mold kunye ne-bacteria, kuquka i-staphylococcus aureus, kwi-1: 60000 dilution. Ngoko ke, iziyobisi zingasetyenziselwa ukunyanga i-mycosis kunye nezifo ezingenangqondo, ngaphandle ngaphandle kwee-trays kunye ne-lotions. Kwizilwanyana zasemakhaya nakwamanye amazwe, i-lumbago ibomvu - isilwanyana esiphuthumayo sentwasahlobo sisetyenziswe njengesilumkiso kunye ne-analgesic ye-hysteria, i-migraine, i-neuralgia, i-rheumatism, i-gout, iigciwane zamathambo, iinjongo kunye ne-folic colic.
Isenzo seprotivokashlevoe se- lumbago evulekile senza ukuba kusetyenziswe kunyango lwe-asthma ye-bronchial, ukukhwehlela ukukhwehlela kwesifo sofuba. Basebenzisa kunye nezigulane nge-eczema, i-mycosis, i-scab, kunye nokuxhatshazwa kwamagulane kunye nesifo seziliso. Kudume ekamelweni kwaye "njengengca yentsikazi". Ngokukodwa kwiimeko xa ukugula kubangelwa "ukungasebenzi" kwe-hormonal. Nangona kunjalo, kutheni uthetha ngawo ngexesha elidlulileyo? E-China naseTibet, ikamelo isasetyenziswa! Kwaye i-homeopathy yanamhlanje isebenzisa utshani bokulala ukuze kuveliswe izidakamizwa ezixabisekileyo kunye nezixhobo ezininzi zePulsatilla.
Sebenzisa ngokuhlakanipha. Ngenxa yokuba ikamelo liyingozi, ukusetyenziswa kwayo ngaphakathi kudinga uxanduva olukhulu kunye nokunyamekela. Ngokomzekelo, ukusebenzisa isityalo, oqokelelayo kunye nesomileyo, awukwazi ukufikelela ngaphambi kweenyanga ezi-3-5. Kufuneka uqaphele kakhulu xa usebenzisa, kuba unokubangela ukuvuvukala kweentso, amathumbu, kunye neembumba. Ukugqithiswa kwamanzi kungabangela ukukhubazeka. Mhlawumbi, ke, iirephepheni zokwenza amayeza asekhaya aphuma ebuthongweni-utshani ziye zagcinwa kancinci. Ukuxhamla: izipuni ezimbini ze-lumbago, sityhalaza amanzi abilisiwe abilisiwe (200 ml). Konke oku kufuneka kube ngama-12 iiyure, ngoko siyancipha size siphuze kathathu ngosuku 50 ml nganye kwiiveki ezintathu. Ukuchasene ngokukodwa kokusetyenziswa kwe-lumbago izifo ezivuthayo zesigca esiswini, isibindi kunye neentso.
Ukuhlamba kwiindawo ezithandanayo: Izizathu kunye neNyango
Indlela yokugcina amayeza
Ukuba inyoyo iyaphuka, isifo sengqondo somntu
I-Hydromassage malunga ne-cellulite
Iindlela zokupheka ezifanelekileyo kwiimali ngeembotyi ezinamathanga
Inkwenkwe yegolide: indlela uSobchak noVitorgan babiza ngayo unyana wabo (shiya ilizwi lakho!)
Hamba kakuhle, ingqondo, mnumzane, uzive!
Vinotherapy - unyango lwewayini ngobuhle kunye nempilo
I-Biography kunye nefilimu ye-Johnny Depp
Luhlobo luni lwabasetyhini abafana nabo?
Indlela yokutya okulungileyo, indlela enempilweni yobomi
Indlela izintso eziphunga ngayo: iimpawu eziqhelekileyo
Indlela efanelekileyo yokutshata
I-Pudding ngamathanga kunye namaapulo
Ukukhulelwa kunye ne-ovarian cyst